တိုင်းအစိုးရ၏ ကျောင်းကားအစီး ၂ဝဝ ကိစ္စ အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် ရှေ့ - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ကျောင်းကားအစီး ၂ဝဝ ကိစ္စကို ကျော်စောသတင်းအဖြစ်သတ်မှတ်၍ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေး ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကကျောင်းကားအစီး ၂ဝဝ ကို ဝယ်ယူရာတွင် ရွှေလက်ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးတွဲလုပ်ကိုင်သည်ဟု ကြေညာပြီးနောက် ရွှေလက်ကုမ္ပဏီပျောက်သွားပြီး ငွေကျပ် ၅ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ချေးငှားသည်ဟု စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာ၌ ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေဆုံး ရှုံးနိုင်သည့် ကျော်စောသတင်းအဖြစ် သတ်မှတ်၍ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်က အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီကိစ္စက တိုင်းအစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်အစီ ရင်ခံစာတွေကွာဟချက်တွေကို အများပြည်သူသိစေချင်တာပါ။ အဲဒါကြောင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ ကျော်စောသတင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ကြေညာချက်ထုတ်တာပါ”ဟု မြန်မာနုိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်မှ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးမောင်မောင်စိုးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေများနှင့် ဥပဒေအထောက်အကူပြု ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြီးမြင့်က ယင်းကိစ္စကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပါက ဥပဒေပညာရှင်အဖြစ် သက်သေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သို့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားကြောင်းပြောသည်။
မင်္ဂလာဒုံရှိ တပ်စွန့်မြေဧက ၉ဝဝ ကျော်ကို မူလတောင်သူများထံ ပြန်မပေးဘဲ လျော်ကြေးပေးရန် စီစဉ်ေ??
မန္တလေးတွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို ထေရဝါဒ သာသနာတော်နှင့် အညီ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ထုလုပ်ရန် မြိ??
ရှေ့နေ ဦးကိုနီ အသတ်ခံရမှုတွင် အမှု ကွင်းဆက်များကို ဖော်ထုတ်မှု အားနည်းခဲ့ဟု ဦးရောဘတ်စန်းအေ??
“သီချင်းရေးတဲ့ အလုပ်က တကယ်ကို လူအား၊ ဥာဏ်အား အချိန်ယူပြီး အလုပ်လုပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေးတာက